Isku shaandheyn lagu wado in lagu sameeyo Golaha Wasiirada Yaase Bixidoona? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Isku shaandheyn lagu wado in lagu sameeyo Golaha Wasiirada Yaase Bixidoona?
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heleyso Wardoon.net ayaa sheegaya inay socoto qorshe la doonayo in Isku shaandheyn loogu sameeyo Golaha Wasiirada Soomaaliya, iyadoo arrintan ay kulamo iyo wada tashi ka lahaayeen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaaraha oo haatan safar dheer dalka uga maqan ayaa la sheegay in ka hor inta aanu dalka ka bixin ay isaga iyo Madaxweynaha dhowr jeer iska arkeen arrinta isku shaandheynta, arrimo badan ay isla meel dhigeen oo ah shaqsiyaad la hadal haayo inay ku soo laaban doonaan Golaha Wasiirada.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa inoo xaqiijiyay in arrinta ku saabsan isku shaandheynta ay aheyd mid maalmihii la soo dhaafay aad isu soo taraysay, inkastoo aan wali la isku afgaran qaabka isku shaandheynta u dhaceyso, balse wada tashiyada ay ahaayeen kuwo horu dhac u ahaa isku shaandheyn dhowaan la filayo inay dhacdo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaar ka mid ah Wasiiraddii horay loo diiday ay ka soo dhex muuqan doonaan isku shaandheynta, halka xubno qaarna ay daaqada ka bixi doonaan, waxayna isku shaandheyntan noqon doonin mid Golaha Baarlamaanka looga baahdo ansixin.
Ilaha aan warkan ka soo xigan ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay inay u badan tahay qaar ka mid ah saaxibada Madaxweynaha inay ku soo laabtaan masraxa Golaha Wasiirada, waxaase la ogeyn xilalka ay heli doonaan, waxaana durba si horu dhac ah loo calaamadeynaya xubno ay dhici karto inay meesha ka baxaan.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa in isku shaandheyntan ay dhacdo dhamaadka bisha Ramadaan ama illaa bisha Soon-fur, waxaana isku shaandheyntan imaaneysaa marka ay Xukuumaddan u buuxsanto lix bilood, maadaama ay haatan u socoto bisha shanaad.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) loo magacaabay Safiirka Turkiga, balse warkan ayaan wali xaqiijin karin, marka laga reebo hadal heynta beryahan jirtay, waxaana la sheegayaa in dhowaan Golaha Wasiirada magacaabi doonaan Safiiro cusub oo dalalka Turkiga iyo Mareykanka ah.
Xukuumadda Soomaaliya oo howl adag ay sugeyso ayaa la filayaa in sanadka 2016 ay dalka gaarsiiso doorasho, hase ahaatee inta aan la gaarin ayaa laga doonayaa inay qabato dhamaan barnaamijyadii lagu gaari lahaa hiigsiga sanadka 2016.